Mucaaradka Libya oo xoojin wada - BBC News Somali
Mucaaradka Libya oo xoojin wada
26 Agoosto 2011
Image caption Mucaaradka Libya
Mucaaradka Libya ayaa waxa ay ciidamo xoojin ah u dirayaan magaalo yar oo dhinaca bariga ku taal oo la yiraahdo Bin jawad, halkaasi oo ay rajeynayaan in inay qabsadaan ka hor inta aanay aadin magaalada Sirte.
Xarunta Midowga Africa ee magaalada Addis Ababa, dalka Ethiopia ayaa iyana waxa ka socda kullan ay albaada u laabanyihiin oo ay uu arinta Libya ka yeelanyo guddiga ammaanka iyo nabada ee midowga africa.
Guddiga waxa la filayaa in uu go'aamo ka soo saaro xallada Libya
Waxa kullankaas guddoominaya Madaxweynaha Dalka Koonfur Africa Jacob Zuma waxaana ka mid ah madaxda ka qeybgalayso Madaxweynayaasha Djibouti iyo Uganda iyo waliba wakiilada waddamada kale ee Africa.
Dhinaca kale diblomaasiyiinta jooga Qaramada Midoobay ayaa sheegaya in heshiis laga gaaray in loo sii daayo hal bilyan iyo bar dollar oo Libya ay leedahay oo xayirneyd si wax looga qabto dhibaatada dhinaca bini'aadanimo.
Kadib kullankii caadiga ahaa ee ay khamiista yeeshaan Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay oo ku saabsanaa xaaladda bariga ayaa ku xigeenka xoghayah Guud ee QM ee dhinaca siyaasadda s B. Lynn Pascoe waxa uu sheegay in golaha KMG ah ee Libya uu sheegay in ay ka filayaan QM inay door xooggan ka cayaarto marka dagaalku dhamaado.